DHEGEYSO-Gudiga xallinta khilaafaadka xeryaha Qaxootiga Kenya oo Daljir lahadlay. – Radio Daljir
DHEGEYSO-Gudiga xallinta khilaafaadka xeryaha Qaxootiga Kenya oo Daljir lahadlay.
Luulyo 13, 2016 3:02 b 0
(July 13 2016)-Gudoomiyaha xalinta khaalifaadka xeryaha qaxootiga Dhadhab kenya Maxamed Caabi Shire ayaa sheegay in tan marki Kenya ay ku dhawaaqday inay xirayso xeryaha qaxootiga ay kor u kacday.
Waxa uu sheegay in dad gaaraya (15.000 )Shan iyo toban kun oo qof soomaali ah ay dalka dib ugu laabteen islamarkaana dadkaas ay khasab ugu laabteen soomaaliya mudooyinkii ugu dambeeyey.
Maxamed Caabi Shire ayaa waraysi uu siiyay Radio Daljir ku sheegay in qaxootiga dhadhaab aysan hada diyaar u ahayn in si khasab ah dalka loogu celiyo, islamarkaan ay jiraan dad horay utagay soomaaliya ay dib ugu soolaabteen xeryaha qaxootiga Zubeir Shiikh Cabdi aya waraystay Gudoomiyaha xalinta Khilaafaadka
DHEGEYSO-Midnimada beesha Sade oo looga hadlay magaalada Caabudwaaq.
DHEGEYSO-Gudoomiyaha Tartan iyo Tacliin oo ka warbixiyey Barnaamijka.